Indlela ukuqaqa amafayela elahlekile kusuka Seagate Backup Plus
I Seagate Backup Plus is a esikhundleni efanelekayo kuya lingumuzi ohlonishwa GoFlex line, enikeza inhlanganisela umbulali ijubane, lula ukusetshenziswa, futhi sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene. Futhi le sici evelele kunazo usekela up amafayela akho kusuka computer eyodwa amafayela ashintshiwe. Nokho, awukwazi ugweme inhlekelele amafayela ukulahlekelwa ngenxa ezinye zezizathu efana ukususwa noma igciwane attack.
Lapho nje uthola amafayela akho kwase ezingabanjwanga, sicela yekani besebenzisa Seagate Backup Plus. Ngoba ungakwazi zisebenzise ithuluzi lochwepheshe ukuze uthole amafayela akho emuva. Amafayela ucabanga baye elahlekile ngenxa nokusula noma ukufometha empeleni namanje ndawana-thile kwidiski yakho. Ngoba indawo amafayela hlala kuphela ezimakwe njengoba “atholakalayo ukuze usebenzise kabusha” futhi amafayela ziba ezingabonakali.
ungasebenzisa Wondershare Data Recovery ukuthola amafayela akho emuva nge izinyathelo ezimbalwa kuphela. Kungakhathaliseki amafayela balahlekile ngenxa virus attack, training, inkohlakalo, ukususwa noma ezinye izizathu, uma kungukuthi emzimbeni owonakele, lolu hlelo kungasiza ukuthola kwabo konke ngokushesha futhi ngendlela ephephile.
Download Wondershare Data Recovery lapha bese uyifake
Manje, ake sithathe Umhlahlandlela isiqalo wethu wokugcina Wizard Mode ku Wondershare Data Recovery.
Step 1, akhethe uhlobo lwefayela wena ukululama
Xhuma Seagate wakho Backup Plus nge echwebeni USB, futhi lolu hlelo. It uzohamba Mode Wizard, futhi wena nje okudingeka uyiphendule 2 imibuzo elula ukuqala amafayela alulame. Elokuqala Isinyathelo munye ukukhetha ziphi uhlobo amafayela ukululama. Uma ungaqiniseki ngakho, ungakhetha wonke izinhlobo ifayela bese uya sinyathelo elilandelayo.
Step 2, khetha kuphi ifayela lakho lost kusuka
Futhi kulesi sinyathelo, ungakhetha "endaweni echaziwe"Bese ukhetha ukwahlukanisa lapho wena elahlekile amafayela akho bese uchofoza"Next". Lapho ukuqalisa ukuskena, hlola “Vumela Deep Scan“, okuyinto zingakusiza uthole ifayela emuva elahlekile more ngokuphelele bese uthole Chile kangcono, kodwa idinga isikhathi esiningi.
Step 3, Kuqala amafayela bese alulame okufunayo
Ngesikhathi lo ukuskena ucedzela, uzobona wonke amafayela ukuyithola abhaliwe Chile ukuskena ne Type yefayela bese Path. Ungazi ukukala ukuthi iyiphi ifayela udinga ukuthola igama lefayela. Uma ungeke ukwazi ukukhumbula igama, ungakwazi futhi kuqala ngayinye ngayinye bese hlola labo ukululama. Futhi uchofoze nje "Alulame"Ukuze ngiphinde ngibabone kukhompyutha yakho.
Khulula Thwebula Data Recovery for Windows
Indlela ukuthola imininingwane elahlekile kusuka Seagate GoFlex
Indlela ukuthola izithombe kusuka ihlelwe yememori card
Kanjani I buyisa izithombe zisusiwe ikhadi kwimemori SD
Indlela ukuze alulame elilahlekile noma ususiwe Imibhalo Word
Indlela ukuze alulame amafayela isusiwe USB Flash Drive on Mac OS X
Posted on March 10, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba alulame idathaAmathegi alulame idatha kusuka seagate yokusekelayo plus, alulame idatha kusuka seagate yangaphandle hard drive, alulame ifayela kusuka plus yokusekelayo
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuze alulame idatha elahlekile esuka Western Digital Passport My?
Next post Next: Nendlela Phinda Data emva Inkohlakalo Windows File System